Fahad oo kulamo siyaasadeed ka wada xarunta NISA | KEYDMEDIA ONLINE
Fahad oo kulamo siyaasadeed ka wada xarunta NISA
Yaasiin, wuxuu ka mid ahaa gacan-yarayaasha Fahad, wuxuuna si weyn ugu dhow yahay Farmaajo, taasina waxa ay fududeysay in agaasimihii here, wali maamulo NISA.
MUQDISHO, Soomaaliya – Sida ay caddeynayan xogo sir-doon agaasimihii hore ee hay’adda NISA, eedeysane, Fahad Yasiin Xaaji Daahir, ayaa daaha gadashiisa ka maamula Nabad-sigidda, waana shaqsiga gaara go’aanka ugu danbeeya ee hay’adda si la mid ah ka hor inta aan xilka laga qaadin.
Billowgii bishii September 2020, Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa ka raacdeeyay xilkii taliyaha Nabad-sugidda, kadib markii lagu eedeeyay khaarijinta Ikraan Tahliil, hayeeshee, Farmaajo ayaa dib ugu magacaabay la taliyaha amnigiisa.
Buuq siyaasadeed oo ka dhashay xil ka qaadistiisa, waxaa ugu danbeyn xilka agaasimaha ku meel gaar ah ee NISA, loo magacaabay Yaasiin Farey, kaas oo gaboof-fallo xooggan galay intii uu yahay jagada taliyaha Nabad-sugidda gobolka Banadir.
Sida ay KON, ugu warrameen ilo xog ogaal ah, Fahad ayaa wali deggan Xarunta Habar-Khadiijo, wuxuuna halka labadii isbuuc ee la soo dhaafay ka waday kulamo looga hadlayay doorashada kuraasta taalla magaalada Beldweyne.
Wuxuu todobaadkii hore Xarunta hay’adda ku qaabiliyay Madaxweyne ku xigeynka Hirshabeelle, Yuusuf Dabageed, halka uu billowgii Ibuucan ku qaabilay wakiillo ka socday Ugaaska beesha Xawaadle uu ku sugan Caasimadda.
Fahad Yaasiin, ayaa qeyb weyn ka qaatay in Guudlaawe, Qoorqoor iyo Lafta-gareen, qabtaan xilalka ugu sarreeyay Jowhar, Dhuusamareeb iyo Baydhabo, wuxuuna horjoogayasha ku cadaadiyay in ay soo saaraan xubno baarlamaan oo isagu u gudbiyay.
Fahad, wuxuu hadda diiradda saarayaa sidii Muqdisho ama Jowhar loogu wareejin lahaa guud ahaan doorasada kuraasta taalla Hiiraan, haddii qorshahaa fashilmo, wuxuu kursiga uu doonayo inuu boobo u raran doonaa Jowhar.
Dhamaan eedeysanayaasha ku jira taliskiisa ayuu qorsheeyay inuu ka dhigo xubno ka tirsan baarlamaanka 11-aad si ay kaga baxsaadan gacmaha sharciga afarta sano ee soo aaddan, hayeeshee, boobka doorashada ayaa wajahaya qaadicid xooggan.